बैजापुर सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीको छैठौं साधारण सभा सम्पन्न | रेडियो भूवर भवानी
२६ मंसिर २०७८, आईतवार २०:५६
बाँके(राप्ती सोनारी ),मंसिर २६-
बैजापुर सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था लिमिटेडको छैठौं साधारण सभा आईतबार राप्ती सोनारीमा सम्पन्न भएको छ । संस्थाका अध्यक्ष बजारी थारुको सभापतित्व एवं राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर –३ का वडा अध्यक्ष गंगाराम थारुको प्रमुख आतिथ्यमा सधारण सभा सम्पन्न भएको हो । साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वडा अध्यक्ष थारुले सहकारी संस्थाले महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो । थोरै रकम बचत गरेर त्यसबाट बिस्तारै अन्य आय आर्जनका काममा सहयोग पुग्ने भन्दै सहकारी संस्थाका विभिन्न समुहमा आबद्ध हुन उहाँले महिलाहरुलाई आग्रह गर्नु भयो ।
राप्ती सोनारीको ३ र ४ नं. वडा भित्र कार्यक्षेत्र रहेको संस्थाले विगत पाँच बर्षदेखि विधिवत रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । संस्थाले सहकारीमा आबद्ध महिलाहरुलाई खशी बोका र दाना वितरण गर्दै आएको छ । जम्मा ६०३ जना सेयर सदस्य रहेको संस्थाको कुल पूँजी रु. ९८ लाख ४७ हजार २२७ रहेको संस्थाका अध्यक्ष बजारी थारुले जानकारी दिनुभयो । सहकारी संस्था अन्तर्गत ७६ वटा महिला समुह र ५५० बढी बचत कर्ता रहेको संस्थाका ब्यवस्थापक चम्फी थारुले जानकारी दिनुभयो । ११ सदस्यीय सञ्चालक समिती रहेको संस्थामा ३ सदस्यीय लेखा समिती, ४ सदस्यीय ऋण लगानी समिती र दुईजना कर्मचारी रहेको ब्यवस्थापक थारुले जानकारी दिनुभयो ।
साधारण सभामा आर्थिक प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्दै लेखा संयोजक बिरमता विष्टले हाल ७६ लाख ८५ हजार ८६५ ऋण लगानी गरिएको र खुद नाफा एक लाख ३३ हाजर ९८१ रहेको बताउनुभयो ।
यसैगरी संस्थाका कोषध्यक्ष भिभा रावत थारुले आगामी कार्यक्रम र योजना प्रस्तुत गर्दै महिला समुह अझ धेरै विस्तर गर्ने बताउनुभयो । साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा विशिष्ट अतिथी बी ग्रुपका सन्तोष क्षेत्री, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँकेका कोषध्यक्ष हुमाशंकर ओली, हेफरका सरद कुमार पोख्रेल, भूवर भवानी बहुउद्देस्यीय कृषक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मिन कुमार थारु, भूवर भवानी मन्दिर ब्यवस्थापन समितीका अध्यक्ष तुलसीराम थारुलगायतका बक्ताले शाुभकामना मन्तब्य दिनुभएको थियो ।
अघिल्लो लेखमाराप्ती सोनारी ५ जुरपानीमा आगलागी, एक घरसहित ३ गोठ जलेर नष्ट
अर्को लेखमाबाँकेको राप्तीसोनारीमा पहिलोपटक असाहय वालसंरक्षण केन्द्र स्थापना